iPhoto saar tus - Sida loo saar iPhoto tus Si fudud
iPhoto waa software tafatirka kaamil ah sawir oo lacag la'aan ah lagu rakibay kasta Mac cusub ee isticmaala in uu abaabulo sawiro, buugaag sameeyo sawir, duubey, jadwalka taariikhda, iwm iyo sawiro in hab fudud. Waxaa laga yaabaa inaad ka heshay kumanaan sawiro maktabadda aad iPhoto oo laga yaabaa in aad ku biireen iPhoto dhacdooyinka ama maktabado badan oo aad ka heli haatan in halkaas waa inaad tus ka badan!
Waxaa jira sawiro aad u badan oo aad ka heli laga yaabaa in ay aad u adag tahay inaad ogaato oo aad tirtirto tus ah. Dabcan, iskaan karaa sawir kasta oo aad ururinta iPhoto iyo mid kasta oo tirtirto gacanta. Laakiin samayn qaadan doontaa waqti badan. Halkan waxaan kuu sheegi doonaa qaar ka mid ah jid oo sahlan in ay soo saarto tus ka iPhoto degdeg ah.
Habka 1. saar tus ka iPhoto la labalaabka Annihilator
Habka 2. barnaamijyadooda kale oo lacag la'aan ah ama lacag leh si meesha looga saaro tus ka iPhoto
Apple ma bixiso hab fudud oo si toos ah uga saarto tus ka iPhoto. Si kastaba ha ahaatee, aad sameyn karto waa wax fudud oo la utility a haan - iPhoto nuqul Annihilator . Waa fur-in si lagaaga caawiyo in aad uga takhalusi tus ka iPhoto. Nixi waa in aysan xor ah oo aad u leeyihiin in ay bixiyaan $7.95.
Si aad u soo saarto tus ka, kaliya furo Annihilator nuqul oo waxaad arki doontaa ah tab magacaabay tus ka raadso. Fadlan hubi "dalbatay MD5" iyo "Calan comments tus ka 'si ay nuqul" waxaa la soo xulay in aad rabtid ah. Tani waxay xaqiijin doontaa in barnaamijka iskaan doonaa sawirrada ah oo dhan ee aad maktabadda iyo DEAD oo dhan koobi nuqul hesho adigoo "nuqul" ee faallada. Haddii aad qabto images aad u badan, waa geedi socodka la helo tus ka qaadan doontaa waqti dheer. Haddii aad isticmaalayso version tijaabo ah codsiga, kaliya waxaa iskaan doonaa ugu badnaan 500 sawirada.
Waxaad ka heli doontaa in nuqul Annihilator ayaa dhammaan faylasha image waxay aaminsan yahay inay tahay tus halkaas. Waxaad dooran kartaa in mid uun iyaga Chuck ka baxo ama, sidoo kale, iyaga dib ugu iPhoto diri haddii aad rabto in aad u dhawraan.
Ka sokow labalaabka Annihilator, waxaa jira tus kale iPhoto saarto codsiyada inay kaa caawiyaan inaad hesho sameeyo shaqada, ha free ama lacag leh noqon. Halkan waxaan ku qor dhowr ah:
# 1. Coobbi nuqul
Akownnada la Coobbi waa anfacaya iPhoto ah nuqul Faydi inuu kaa caawiyo inaad la sawiro iyo videos nuqul ka qabtaan. Waxay ka dhigaysa hawsha la helo oo ay ka saareen tus in iPhoto si weyn u fudud.
# 2. Araxis Raadi nuqul Files
Araxis Raadi nuqul Files waa app sahlan in la isticmaalo kaa caawinaya in aad ka heli & maamuli files la content nuqul, iyadoo aan loo eegin magaca.
# 3. Tababare iPhoto Library
Tababare iPhoto Library waa gargaar dhamaystiran oo iPhoto si loo adkeeyo aad iPhoto. Ka sokow awood u awood badan si uu u doondoono iyo saaro nuqul, waxa kale oo aad ku milmaan karaa, kala, dib u dhiska ama maareeyaan maktabadaha iPhoto aad qasabno gudahood.
Waxa la Sameeyo Haddii Device ay ku guul daraysato in ay ku xidhmaan Wondershare MobileTrans
> Resource > Transfer > Sida loo saar nuqul iPhoto Photos Si fudud